Momba anay - Yantai Joyshing Glass Co., Ltd.
Yantai Joyshing Glass Co., Ltd. ho mpanamboatra sy mpamatsy vokatra fitaratra isan-karazany any Shina, dia mikendry ny hanome vahaolana fitaratra tokana mandroso amin'ny fanamboarana, haingon-trano, fitaterana, fiarovana, fialam-boly & fanatanjahan-tena sns. Joyshing Glass dia misahana manokana amin'ny famokarana vera miolakolaka namboarina. Azontsika atao ny manamboatra vera miolaka amin'ny radius rehetra ary ny veranay miforitra dia misy annealed, laminated, tempered (toughened), ary vera roa, mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Fampiharana mahazatra ho an'ny fitaratra miolikolika dia misy ny lafiny fivarotana miolakolaka, varavarankely miolikolika, valindrihana vera miolaka ary efijery fandroana namboarina.
Reharehantsika amin'ny fifaninanana matanjaka avy amin'ny teknolojia mandroso sy ny fifehezana kalitao henjana. Nanolo-tena hatrany izahay tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknikan'ny fanamboarana mandroso ary nampiharina ny fifehezana kalitao henjana amin'ny alàlan'ny dingana tsirairay hiantohana ireo vokatra mendrika. Amin'ny maha-orinasa iray lehibe azy, ny JOYSHING dia afaka manome vokatra marobe feno kalitao ambony amin'ny vidin'ny fifaninanana. Glass Tempered Glass, aka fitaratra mitongilana vita amin'ny vera, dia vera azo antoka novokarina tamin'ny alàlan'ny fikolokoloana fitaratra sy ny fanamainana. Ny fomba ampiasaina mba hahazoana Joyshing Glass miolakolaka vera feno vera dia misy ny fitaratra fisaka vera ka hatramin'ny plastika, manome ny tadiavina tadiavina amin'ny fizotran'ny fitaratra amin'ny alàlan'ny fiaramanidina mangatsiaka.
Ankoatry ny haitao mandroso sy ny fifehezana kalitao henjana, ny fifaninanana matanjaka an'i JOYSHING dia avy amin'ny serivisy manetriketrika sy matihanina ihany koa. Ny ekipan'i JOYSHING efa za-draharaha sy matihanina dia afaka manome fanohanana ilaina sy ilaina ary serivisy aorian'ny fivarotana hanomezana toky fa ny zavatra takian'ny mpanjifa rehetra, na lehibe na kely, dia afaka mahazo fahafaham-po avy hatrany.
Ny fitaratra mora voahodina dia manana fitomboan'ny tanjaka efatra heny raha oharina amin'ny vera tsy mitongilana mitovy hatevina ary raha vaky dia mamaky sombin-javatra bitika kely tsy tambo isaina manana endrika cubicle kely na kely kokoa.
Ny vera miolakolaka (mihamafy) dia azo ampiasaina hanampiana tsipika milamina amin'ny trano iray. Mety tsara amin'ny toeram-pivarotana, balstrades amin'ny lavarangana na tohatra, vera somary miforitra (henjana) azo ampiasaina koa amin'ny trano noforonina arafitra.